Ogandà Grasshopper Entrepreneurs Amin'izao fotoana izao dia tsy ho tonga mpikatroka COP26
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Ogandà Grasshopper Entrepreneurs Amin'izao fotoana izao dia tsy ho tonga mpikatroka COP26
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • tompon'andraikitra • News sustainability • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Oganda
Valalaka any Ogandà
Raha ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny fiovan'ny toetr'andro momba ny famerana ny entona karbônina ho 1.5 degre, fantatra amin'ny anarana hoe COP26, dia natao tany Glasgow tamin'ny 1-12 Novambra 2021, tsy fantatry ny mpitondra izao tontolo izao, tanàna kely fantatra any ivelan'ny Tanànan'i Greater Masaka, any amin'ny 130 kilometatra atsimo andrefana. Ao Kampala, renivohitr'i Ogandà, vondrom-piarahamonina Ogandey no mivelona amin'ny fiotazana valala raha mbola nisy ny fanjakan'i Buganda nanomboka tamin'ny taonjato faha-13, anisan'izany ny toerana misy ny fianakavian'ny valala antsoina hoe “nsenene” iray amin'ireo foko 52 ao Buganda. .
Any Bukakata izay eo amin'ny sisin'ny Masaka lehibe kokoa eo amoron'ny Farihin'i Victoria, dia mamono olona ny vondrom-piarahamonina amin'ny fijinjana ity hanim-py malaza ity eo anelanelan'ny volana Mey sy Novambra.
Amin’io fotoana io dia voatery mivoaka ny barika ny valala noho ny orana.
Mifanohitra tanteraka amin'ny “Noely fotsy” any Andrefana, izay mampiavaka ny orampanala mba hanambara ny vanim-potoana.
Any Ogandà dia ny valala no “manerana oram-panala” ara-bakiteny avy any an-danitra, misarika vondrom-piarahamonina maromaro avy amin'ny olon-dehibe ka hatramin'ny ankizy mihetsiketsika mijinja an-tsokosoko ireo biby ireo. Raha Ogandey i Dadabe Noely (Mt. Nicholas), dia azo inoana fa natao batisa “Noely maitso” ilay vanim-potoana.
Tsy mitsaha-mitombo, lasa orinasa lehibe ny varotra miaraka amin'ireo mpandraharaha Ogandey maromaro mampiasa jiro mamiratra sy setroka avy amin'ny ahitra mirehitra mba hanamaivanana ireo bibidia amin'ny alina izay mamakivaky ny tafo vy sy mitsambikina ao anaty barika mba ho voafandrika sy hojinjaina. Tena nazava tsara ireo tanàna ireo, ka indray mandeha, rehefa nandeha alina niainga avy any Kigali nankany Kampala, ity mpanoratra ity dia nanondro ny jiro ho tanànan’i Masaka, nefa fantany fa andiam-balala voasinton’ny hazavana izy io, ka tena nandiso fanantenana an’ireo. mponina hafa.
Ny gony amin'ireo valala ireo dia afaka mahatratra hatramin'ny UGX 280000 (80 dolara amerikana) amin'ny vidiny ambongadiny any Kampala izay ilain'ireo mpivarotra amoron-dalana mivarotra izany amin'ny mpandeha amin'ny fifamoivoizana mankany amin'ny tsenan'ny tanàna lehibe. Betsaka ny vondrom-piarahamonina avy any Masaka indrindra no nahavita nanandratra ny fivelomany, nanorina trano, ary nampianatra ny zanany tamin'ny varotra mihitsy aza.
Ankoatra izany, araka ny fikarohana avy amin'ny Fikambanana Sakafo sy Fambolena (FAO), ny bibikely azo hanina dia manatsara ny fivelomana, manampy amin'ny fiarovana ny sakafo sy ny sakafo, ary manana dian-tongotry ny tontolo iainana ambany kokoa raha oharina amin'ny loharano proteinina hafa avy amin'ny hen'omby, henan-kisoa, akoho, ary akoho. ondry.
Na dia eo aza ny porofon'ny hasarobidin'ny sakafo ho loharanon-tsakafo hafa izay sady mahavelona no mahavelona ny tontolo iainana, ireo firenena toa ny ny USA, fanjakana EU, ary UK dia tsy nanitsy ny fameperana mba hamelana ny fanafarana bibikely na dia aondrana aondrana aza. Maro amin'ireo mpizahatany afrikanina no niharan'ny fanaraha-maso hentitra ny sisintany izay manimba ity hanim-py sarobidy ity rehefa tonga any amin'ny toerana halehany amin'ny alahelony. Indray mandeha, mpandeha Ogandey iray (voahazona anarana) no nifidy ny hanary am-bava ireo valala sarobidy fa tsy hanolotra azy ireo amin'ny mpiasan'ny Fadintseranana amerikana mahagaga, fa tsy rehefa avy nivezivezy teny amin'ny antsasany manerana izao tontolo izao.
Misy ihany koa ny porofo fa ny bibikely dia mamoaka entona mandatsa-dranomaso sy amoniaka kely kokoa noho ny biby fiompy mahazatra izay mitentina 14.5% amin'ny entona entona mandatsa-dranomaso maneran-tany, izay ny metanina avy amin'ny biby fiompy dia olana lehibe mitentina 16 isan-jato, araka ny filazan'ny United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). ).
Ny bibikely dia mila ampahany amin'ny tany, milina fambolena toy ny traktera, pestiside na paompy fanondrahana, ary mitombo ao anatin'ny andro fa tsy volana na taona. Mandany angovo kely kokoa izy ireo raha oharina amin'ny karazana fambolena hafa izay mandrisika ny fahaverezan'ny zavamananaina maneran-tany ary mandray anjara lehibe amin'ny famoahana entona mandatsa-dranomaso. Miaraka amin'ny tahan'ny olona 1 amin'ny bibikely 1.4 lavitrisa, lehibe izany ary mety ho fanamaivanana ny sakafo eran'izao tontolo izao na dia aroso amin'ny vovoka na endrika mahafinaritra kokoa aza mba hamonjena aina.
Ao amin'ny COP26 izay nandraisan'i Greta Thunberg anjara niaraka tamin'ireo tanora mpikatroka mafàna fo momba ny toetrandro, Vanessa Nakate avy any Ogandà no nanamarika ny fihaonambe ho tsy fahombiazana tamin'ny filazana fa “fetiben'ny fanasan-java-maitso any avaratra” izy io.
Tsy lavitra ny fahamarinana izay tsy mandeha amin'ny resaka ny G20 na dia mandray anjara amin'ny 80% amin'ny famoahana CO2 aza. Raha mbola tsy ao amin'ny sakafo fanasan'ny fihaonana an-tampony manaraka ny bibikely (araka ny tokony ho izy fa ho an'ny tavoahangin-tsolika sasany) hanampy amin'ny escargot, sushi ary caviar - zatra kokoa amin'ny palette tandrefana, dia mbola tsy nahomby izany. Nanampy i Nakate, "Raha ny tantara, i Afrika dia tompon'andraikitra amin'ny 3% amin'ny entona eran'izao tontolo izao ary ny Afrikana dia mijaly amin'ireo fiantraikany mahery vaika indrindra vokatry ny krizy amin'ny toetr'andro." Na izany aza, dia nanolotra teny fanantenana izy, nanoro hevitra fa mety hitranga ny fiovana raha manohy mitazona ny mpitondra ho tompon'andraikitra amin'ny fanimbana ny toetr'andro ny mpikatroka.
Mampalahelo fa rehefa niverina an-tanindrazana tany Ouganda any Nakate, dia nisy fihenan'ny vokatra azo avy amin'ny fiotazana valala mba hifanaraka amin'ny voka-dratsin'ny fiovaovan'ny toetr'andro vokatry ny fandripahana ala. Ao amin'ny Bukatata, faritra midadasika mahatratra 9,000 hektara ny toeram-ponenan'ny bibidia izay ala sy ahitra teo aloha dia toeram-pambolena mananasy ankehitriny.
Tany Kampala izay nianjeran'ny valala hatramin'ny taona 90, ny toerana maintso sy ny ala be dia be no lasa nanamboatra toeram-pivarotana lehibe, trano avo, trano fonenana ary lalana.
Angamba raha dinihina, masoivoho tsy voahevitra ho an'ny valala sy mpikatroka amin'ny fiovan'ny toetr'andro momba izany, dia i Lupita Nyong'o, ilay mpandresy tao amin'ny akademia tamin'ny mpilalao sarimihetsika mpanohana tsara indrindra tamin'ny taona 2014, fony izy nanome loha hevitra ny akanjony tamin'ny fanokafana ny fetiben'ny sarimihetsika Cannes tao amin'ny “nsenene” Ogandà. , ” noho ny lokony sy ny endrika mitovy amin'ny elatra ary manome voninahitra ny vehivavy Ogandà ho an'ny fitaomam-bolo.
Mandra-pahatongan'izany, ireo mpandraharaha valala ao Ogandà dia hijanona ho manjavozavo tahaka ny fonenany ao Masaka mandra-pahatongan'ny olona iray avy amin'ny G20 mahazo ny memo.